RW Rooble oo maanta gaaray Magaladda Jowhar (Sawiro) – Radio Daljir
RW Rooble oo maanta gaaray Magaladda Jowhar (Sawiro)
Juunyo 3, 2021 12:03 g 0
Wafdi uu hoggaaminayo Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa gaaray magaalada Jowhar ee Caasimadda Dowlad Goboleedka Hir-Shabeelle.
Wafdiga oo ka ambabaxay Magaalada Muqdisho ayaa Magaalada Jowhar ku tageen diyaarad kuwa qumaatiga u kaca ee Helicopter ah oo ku degtay Saldhig AMISOM ku leeyihiin bariga magaalada Jowhar, kadib markii Garoonka diyaaradaha uu saameyn ku yeeshay fatahaada Wabiga.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa kormer ku tagay goobihii uu ku fatahay Wabiga Shabelle ee sababay in magaalada go’doon gasho, waxaana la sheegay inay la socdaan Xubno ka tirsan Hay’adaha Qaramada Midoobay.
Saacadaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in Ra’iisul Wasaaraha uu la kulmo Madaxda Maamulka Hir-Shabeelle iyo labada Gole, isaga oo kala hadli doono sida loogu gurman karo dadka uu saameeyay fatahaada Wabiga.
Golaha Wasiiradda Jubbaland oo la dhaariyeey